Saudi Tourism Consulting: US- Saudi Tourism Venture kwupụtara na JTTX Jeddah
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia » Saudi Tourism Consulting: US- Saudi Tourism Venture kwupụtara na JTTX Jeddah
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Editorial • investments • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Akụkọ na -emegharị na Senegal • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
The Ihe ngosi Jeddah International Travel na Tourism JTTX is bụ ahịa njem njem kachasị ukwuu na alaeze Saudi Arabia.
Ebe Saudi Arabia na-emepe obodo ndị ọdịda anyanwụ iwebata njem nlegharị anya n'alaeze ahụ, ọ bụ nnukwu mgbanwe na amụma ma mepee ohere ọhụụ ọhụụ maka mpaghara ndị njem.
JTTX bụ usoro ụzọ na-eduga nke mpaghara mpaghara njem niile, na-eweta ọtụtụ ebe njedebe na ọrụ ụlọ ọrụ njem.
Ọ bụ ohere pụrụ iche maka ndị na - eme ihe ngosi na ntanetị, na-akparịta ụka ma na-azụ ahịa na azụmaahịa ahụ, yana igosipụta ọrụ ha ozugbo na ọha na eze.
JTTX gosipụtara mkpa njem na njem na-aga n'ihu na akụ na ụba obodo, ebe ahịa ndị njem nke Saudi Arabia bụ otu n'ime ụwa na-eto ngwa ngwa. Dika onu ogugu UNWTO ohuru, ala eze huru uto 14% n'ime afo gara aga, onye nke ise kachasi nma n'uwa dum.
NewsNews Group bụkwa onye nwe ya eTurboNews , na n'okpuru nduzi nke onye isi ala na onye isi oche Juergen Steinmetz, ya na Raed Habbis, Onye isi ala nke RHH na Saudi Arabia, na-eme Otu ndi njem nleta nke Saudi.
Dr. Peter Tarlow ga-aga nchekwa nchekwa njem nleta na ọzụzụ nchekwa na ọrụ nyocha. Dr. Tarlow bụ ọkachamara ama ama n’ụwa niile gbasara nchekwa njem ma na-echekwa isi Nchekwa njem , nke bụ akụkụ nke NewsNews Group.
Saudi Tourism Group bụ ndị njem na-agba izu na otu azụmaahịa na-agbakwunye ọhụhụ na azụmaahịa maka mmepe njem na Saudi Arabia. Saudi Tourism Group dị njikere ịrụ ọrụ na ngalaba ọha na nke onwe.
STG ga-ekwuputa "Akụkọ banyere njem nlegharị anya nke Saudi" n'oge na-adịghị anya, nke ga-abụ akwụkwọ izizi mbụ nke Saudi na njem njegharị ụwa. Saudi Tourism News dị njikere ịrụ ọrụ na ahia na mgbasa ozi ndị isi, yana hotels, ntụrụndụ, na mpaghara ọha na-agbakwunye na visibiliti nke ngwaahịa ndị njem nke Saudi.
Saudi Tourism News ga-abụ njikọta n'etiti eTurboNews na Otu Njem Nleta Saudi. Akwụkwọ akụkọ njem nlegharị anya nke Saudi ga-anọ n'okpuru Onye isi oche nke Onye Ọchịchị Royal Dr. AbdulAziz Bin Naser.
Raed Habbis HRH Dr. AbdulAziz Bin Naser na HE president nke Gaca
Njem nleta Saudi